Marvel Avengers: Endgame scene ကို LEGO နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည် Disney+
03 / 10 / 2021 04 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 253 Views စာ0မှတ်ချက် 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, Avengers, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, Disney, Disney+, Lego, Lego Marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Thanos, အဆိုပါ Infinity Saga, YouTube ကို
မှတ်မိနိုင်သော portals မြင်ကွင်း Marvel စတူဒီယို၏ Avengers: Endgame ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည် Lego အုပ်စုနှင့် Disney+.
What's Up ၏နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ၊ Disney+ - streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများအတွက်ပြပွဲတစ်ခုကိုရည်စူးသည် Marvel Studios 'The Infinity Saga နှင့်လှိုင်း၏ Lego Iron Man မှ Avengers: Endgame သို့ရုပ်ရှင်များစုဆောင်းခြင်းကိုပြန်လည်ဖန်တီးသည်။ Jenny Lorenzo နှင့် Andre Meadows တို့ကအိမ်ရှင်အဖြစ် p ကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်ပုံစံသစ်ဖြင့်ပြန်လည်ဖန်တီးသည်art စပွန်ဆာအရစ်ကျ။
p အဖြစ်art blockbuster ရုပ်ရှင်၏ကြီးမားသောသူရဲကောင်းများအတွက်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ၏ Marvel Cinematic Universe အဖွဲ့သည်အချိန်ခရီးသွား Thanos နှင့်သူ၏သားရဲများ၊ စစ်သားများနှင့်နည်းပညာအဆင့်မြင့်လက်နက်များဖြင့်တိုက်ခိုက်သည်။
ဇာတ်လမ်းတွဲကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည် Marvel Cinematic Universe ရုပ်ရှင်များကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်သည် Disney+ အပြင်သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းအခြားများ Infinity Saga LEGO အစုံဗီဒီယိုတွင် Avengers: Endgame မှ portals scene ၏တရားဝင်နှင့်စစ်မှန်သောအပန်းဖြေမှုပါ ၀ င်သည်။ 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော နှင့် 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off.
ပြပွဲရဲ့ minifigure ဗားရှင်းတွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူရဲကောင်းများကိုစစ်မြေပြင်သို့ပို့ဆောင်ပေးသောဖွင့်ထားသော arcane gateway များကိုကိုယ်စားပြုရန် sequence ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသည်။
မှော်တံခါးများအတွက်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုတွင်မည်သည့်အခါမှမပေါ်ပါ Lego Marvel Infinity Saga အစုံ၊ ဘောနပ်စ်အပြည့်အစုံကိုတရားဝင်အွန်လိုင်းတွင်ယခုရနိုင်သည် 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard မကြာသေးမီကလည်းပြန်လွတ်လာသည်။
← Lego Star Wars Battle Droids များသည်ကျောက်တုံး၌ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ရှင်သန်နိုင်သည်
LEGO Art 21226 Art ပရောဂျက်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးပါပြီ →